Press Statement and Interim Report of Myanmar By-elections 2017 | Asian Network for Free Elections
of the 2017 By-Elections in the Republic of the Union of Myanmar
IEOM Profile: The ANFREL International Election Observation Mission (IEOM) is composed of fifteen (15) international election observers, which include two (2) electoral analysts (EA) deployed for four (4) weeks and thirteen (13) short term observers deployed for2weeks. The IEOM covered 194 polling stations in 19 constituencies and 22 townships.
This interim report is an assessment of the pre-election activities (more specifically advance voting within constituency for civil servants and vulnerable persons), the campaign and cooling period, the election day, as well as the counting and tabulation of the results. ANFREL conducted desk research, in-depth interviews with key election stakeholders, and field monitoring and random checking of polling stations during the advance voting period (22-31 March 2017) and on election day (1 April 2017).
ANFREL will issueafull-length reportamonth after the polls which will expound on the information included in this Interim Report and will include post-election assessments focused on electoral dispute resolution and recommendations....
ANFREL Press Statement on Myanmar 2017
Another Positive Step Towards Myanmar’s 2020 General Election
Yangon, 03 April – Today, the Asian Network for Free Elections(ANFREL) commends the people of Myanmar for their holding of By-Elections on April 1, 2017. Foracountry still early in its democratic transition, the success of the by-elections is something the people of Myanmar can be rightly proud of. Observations from ANFREL observers across the country revealed polls that, generally speaking, represent continued progress in Myanmar’s electoral development. ANFREL hopes that the lessons learned from these by-elections can be combined with those from 2015 to bring elections in 2020 that strengthen and build upon the improvements made in recent years.
ANFREL’s Head of Mission, Mr. Damaso Magbual, agreed when he said that “While the post-election period should not be overlooked, ANFREL’s observation so far reveals that Myanmar has taken another important step towardsamore democratic future. We hope the UEC and all stakeholders will continue during the post-election period the vigilance, dedication, and professionalism they have shown up until now.”
We also wish to extend congratulations to the Union Election Commission (UEC) and all related government offices for their management of the polls. While the UEC’s post-election work remains, the efforts of Polling Station staff to create an environment conducive to free and fair elections is worth noting. Compared to 2015, ANFREL found both polling station staff and election administrators to be more confident and better able to follow the by-election’s rules and guidelines. Given what is still relatively little experience managing elections, the UEC, its sub-commissions and down to the Polling Station level generally performed admirably to manage the process. We were also happy to see that some of the 2015 recommendations from Election Observers, both domestic and international, were implemented. ANFREL hopes that future reform incorporates even more of those recommendations.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများဆီသို့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခု
ရန်ကုန်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်။ ယနေ့ Asian Network for Free Elections (ANFREL) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူလူထုအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ခြင်းအပေါ် ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၏ အစောပိုင်းကာလအတွင်းမှာ ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခြင်းသည် မြန်မာ ပြည်သူလူထုအတွက် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ANFREL မှ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၏ တွေ့ရှိချက်များအရ မဲဆန္ဒပေးခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဆက်လက်တိုးတက်လာမှုကို ကို်ယ်စားပြုနေပါသည်။ ယခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှ သင်ခန်းစာယူစရာများကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ သင်ခန်းစာယူစရာများနှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါ များမကြာမီနှစ်များအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုများ ပိုမိုခိုင်မာ အားကောင်းလာမည်၊ ဆက်လက် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဟု ANFREL မှ မျှော်လင့်ပါသည်။
ANFREL ၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Mr. Damaso Magbual သည် သဘောတူထောက်ခံပြီး “ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလကို လစ်လျူမရှုသင့်ပေမယ့် အခုအချိန်ထိ ANFREL ရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပိုပြီး ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ အနာဂတ်ဘက်ကို ဦးတည်နေတဲ့ နောက်ထပ် အရေးကြီး ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း လှမ်းနိုင်ခဲ့တာကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ အားလုံးသော သက်ဆိုင်သူတွေဟာ အခုထိ လုပ်ဆောင်ပြခဲ့တဲ့ သတိဝီရိယ၊ စူးစိုက်နှစ်မြုပ်မှုနဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကို ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့ (IEOM)
IEOM အကြောင်း - ANFREL ၏ နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ရက်သတ္တပတ် ၄ ပတ် တာ ဝန်ချထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲသရုပ်ခွဲပညာရှင် ၂ ဦးအပါအဝင် ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်တာဝန်ချထားသည့် ကာလတိုစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၁၃ ဦး တို့ဖြင့် စုစုပေါင်း နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ၁၅ ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဖွဲ့သည် ၂၂ မြို့နယ်ရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၁၉ ခုတွင်ရှိသော မဲရုံ ၁၉၄ ရုံကို စောင့် ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ဤကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာသည် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလလှုပ်ရှားမှုများ (ပို၍ တိတိပပဆိုရလျှင် ဝန်ထမ်းများ နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော ပြည်သူများရှိသော မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကြိုတင်မဲပေးခြင်း)၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တစ်ရက်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့အပြင် ရလဒ်ရေတွက်ခြင်းများ စာရင်းရေးသွင်း၍ ပေါင်းခြင်းများအပေါ် ဆန်းစစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ANFREL သည် ရုံးတွင်း လုပ်ဆောင်သော သုတေသန၊ အဓိကကျသော ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သူများနှင့် အသေးစိတ် မေးမြန်းမှုများ၊ ကြိုတင်မဲပေးသည့်ကာလ (မတ်လ ၂၂-၃၁၊ ၂၀၁၇) နှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ (ဧပြီလ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၇) တို့တွင် မြေပြင်၌ မဲရုံများ အစဉ်လိုက်မဟုတ် ကျပန်း ရွေးချယ်၍ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ANFREL သည် နောက်တစ်လအကြာတွင် ရှည်လျားသော အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ရာ ယခုကြား ဖြတ်အစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များ၊ ရွေး ကောက်ပွဲအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်းကို အာရုံပြုမှုပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလ ဆန်းစစ်ချက်နှင့် အ ကြံပြုချက်များပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ANFREL, Asian Network for Free Elections, By-Elections, Election, Election Observation, Myanmar